बौद्ध भिक्षुहरूले - पुरातन संसारको धर्मको अनुयायीहरूलाई
पौराणिक कथाहरु को अनुसार, बौद्ध भिक्षुहरूले, ज्योति हासिल गर्न, मानवता मुक्ति बाटो संकेत गर्नुपर्छ। गुरु Rinpoche - - प्रेतहरू पराजित गर्न भारत देखि आएका ग्रैंड मास्टर गर्दा तिब्बत को 700s यो धर्म, पहिलो भएको थियो। कि पछि, तिनीहरू सबै तिब्बती बौद्ध अभिन्न भाग हुन्छन्।
बौद्ध - तीन को पुरानो संसारको धर्म। 12 शताब्दीपछि - ख्रीष्टियन बारेमा पाँच शताब्दीपछि देखा, र इस्लाम। बौद्ध भिक्षुहरूले चीन, कोरिया, मङ्गोलिया, भियतनाम, कम्बोडिया, जापान, लाओस, र थाईल्याण्ड मा, एशिया मा ज्यादातर बाँचिरहेका छौं। हाम्रो देशमा यो Tuva, Buryatia र Kalmykia बासिन्दाहरू को धर्म हो। तर हाल, बौद्ध भिक्षुहरूले पनि मस्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग र अन्य ठूलो रूसी शहर मा पाइन्छन्। यो संसारमा छ यो धर्म अनुयायी को कुल संख्या को कति निर्धारण गर्न गाह्रो छ। तर केही सामान्य मा, त्यहाँ बारेमा एक लाख पुरुष र महिला धार्मिक र बारेमा 400 मिलियन राख्नु, भनेर भन्न सक्छ।
बौद्ध प्रार्थना मोती
बुद्ध अनुयायीहरूलाई mantras पढिरहेको बेलामा प्रयोग माला समयमा आफ्नो विचार ध्यान गर्न। परंपरागत तिनीहरूले ठीक 108 मोती, तर, सिद्धान्त, सम्भव विकल्पहरू मा, आफ्नो नम्बर शिक्षा केही प्रावधान प्रतिनिधित्व देखि। उदाहरणका लागि, परम्परागत माला मोती 108 अर्थ आफ्नो आत्मा पिरोल्ने कि मानव इच्छा को 108 प्रकार। गन्ध, दृष्टि, स्पर्श, सुनेर स्वाद र मन: तिनीहरूले छ सचेत सम्बन्धित छन्। विगतमा, वर्तमान र भविष्य एक आन्तरिक र बाह्य वस्तुहरु को इच्छा। शब्द, विचार र कार्यहरू मा: त्यहाँ तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तीन तरिका हो। त्यहाँ अन्य विकल्प हो को 108 गुप्त, तर सबै भन्दा प्रसिद्ध।
बुद्ध गरेको शिक्षा। हीरा बाटो
हीरा बाटो बौद्ध अक्सर प्रभु बुद्ध को मुख्य शिक्षाले jewel रूपमा वर्णन गरिएको छ। यस मन को असीमित क्षमता मा व्यक्त गरिएको छ यो मुख्य उद्देश्य, प्रत्येक घटना को प्रामाणिकता को जागरूकता छ। ज्योति प्राप्त छिटो परिणाम सुनिश्चित गर्न, बौद्ध भिक्षुहरूले प्राकृतिक शुद्धता सबै sensations बदलन प्रेरणादायक अन्तरदृष्टि भर पर्छन्।
त्यतिबेला, जब विद्यार्थीहरू छैन बुद्ध एक ईश्वरीय व्यक्ति, देखे तर बस आफ्नो मन को ऐना तिनलाई विश्वसनीय, उहाँले तिनीहरूलाई हीरा बाटो गर्न परिचय सकेन। आफ्नो शक्ति र मर्मज्ञ दृष्टि, उहाँले आफ्नो पूर्ण विकास गर्न योगदान गर्ने मान्छे को मर्यादा मा wakes।
बौद्ध तीन उच्च स्तर दृष्टिकोण
तरिका को बाटो, लामा मा बाटो गहिरो दृष्टि र मनन: को बुद्ध शिक्षा को उच्चतम स्तर तीन नजिकिंदै समावेश छ। बौद्ध भिक्षुहरूले यी विधिहरू प्रयोग गरेर पूर्णतया आफ्नो ऊर्जा वा चेतना शक्ति कारण विकास गर्न मौका छ। ज्योति गर्न broadest दृष्टिकोण पनि लामा मनन गर्दा सामेल छ, तर शिक्षक विश्वसनीय छ भने मात्र। आफ्नै व्यक्तिगत गुणहरू विकास चाहेको स्तर हासिल रूपमा एक व्यक्ति, आफ्नो मन को अन्तरिक्ष मा हुन सक्छ। हीरा बौद्ध बाटो नकारात्मक र हानिकारक प्रभाव को कुशल हटाउने बढवा दिन्छ। कारण यो सिद्धान्त, एक व्यक्ति प्राप्त भविष्यमा कि छुटकारा कठिन परिस्थिति सक्छ। हामी तपाईंको आफ्नै मन संग काम गर्न आवश्यक छ, र त्यसपछि हामी हाम्रो आफ्नै कार्यहरू सिकार हुने छैन।
Shrovetide - यो के हो?
भोलोग्डा: मन्दिर Constantine र हेलेना। इतिहास र विवरण
ख्रीष्टको गिरजाघर (र्याजान) - इतिहास र वास्तुकला को चमत्कार
बिहान प्रार्थना, एक सबै राम्रो कामहरू को निर्माता धन्यवाद रूपमा।
कपटिक चर्च - मिश्र गरेको मसीहीहरूको एउटा किल्ला
शवपरीक्षा परिवर्तनहरू मूल्यांकन मा Lyarshe स्थलहरू
म के एक स्मारक को प्रश्न कसरी जवाफ दिन सक्नुहुन्छ?
लियो Babauta - ढिलासुस्तीको एउटा लडाकु
अध्यापन मा संचार को संरचना
मोबाइल फोन मा Teletype के हो?
बेबी burp प्रत्येक रुचाउने र Hiccups पछि: कारण, डाक्टर सल्लाह
एड्रेनालिना समूह: रचनात्मकता र सुविधाहरू
Hrodna महिमा Mound: इतिहास, फोटो। महिमा को माउन्ट प्राप्त कसरी?